मटोपन घटाउन चाहानु हुन्छ ? | मरुभूमीको कोसेली nepalkuwait
मटोपन घटाउन चाहानु हुन्छ ?
Posted on मार्च 14, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी	मोटोपमोटोपनबाट चिन्तित हुनुहुन्छ? अब चिन्ता नगर्नुहोस् । तपाइर्ंले पसिना काढेर एक्सरसाइज पनि गर्नुपर्दैन न त खान मन लागेका परिकार त्यागेर डायटिङ नै गर्नुपर्छ । हामीसँग केही सजिला टिप्स् छन् जसलाई पालना गरेर तपाईंले आफ्नो शरीरको आकार घटाउननबाट चिन्तित हुनुहुन्छ ? अब चिन्ता नगर्नुहोस् । तपाइर्ंले पसिना काढेर एक्सरसाइज पनि गर्नुपर्दैन न त खान मन लागेका परिकार त्यागेर डायटिङ नै गर्नुपर्छ । हामीसँग केही सजिला टिप्स् छन् जसलाई पालना गरेर तपाईंले आफ्नो शरीरको आकार घटाउन सक्नुहुन्छ ।
मोटोपन घटाउन क्यालोरी घटाउनुपर्छ । त्यसका लागि एक्सरसाइज एउटा उपाय हो भने फुडह्याबिट बदल्नु अर्को उपाय । खानामा प्रोटिन नियन्त्रण र हलुका खानाको मेनु तयार गरेर तपाईं अनावश्यक क्यालोरी घटाउन सक्नुहुन्छ । हामी तपाइंलाई कामका समयमा पनि पालना गर्न सकिने टिप्स् दिन्छाँै । यी सात टिप्स् सातै दिन पालना गर्नुहोस् र अनुभव गर्नुहोस्- कुनै कडा प्रयासविना नै तपाईंको शरीर कति फिट र हलुका बन्नेछ ?
१.तपाईं अफिसमा काम गर्दा कुर्सीमा लामो समय बस्नुपर्छ भने कुर्सीमा बस्दा आफ्नो खुट्टा भुइँमा ट्यापिङ गर्नुहोस् अनि लामो समय बस्नुभन्दा उठ्नुमा रमाउनुहोस् । फुर्तिलो बन्नुहोस्, अफिसमा पनि यताउता हिँड्डुल गरिरहनुहोस् । यसो गर्दा कुर्सीमा मात्र बसिरहनेको भन्दा तपाइर्ंले दैनिक तीन सय ५० क्यालोरी बर्न गर्न सक्नुहुन्छ । नियमित रूपमा दैनिक तीन सय ५० क्यालोरी बर्न गर्दा एक वर्षमा तपाइर्ंले झन्डै १६ किलो तौल घटाउन सक्नुहुन्छ ।
२.नियमित रूपमा निश्चित समयको अन्तरालमा खाना खानुहोस् । हरेकपटकको खाना चार सय क्यालोरीभन्दा नबढाउनुहोस् । हरेकपटक उत्तिकै मात्रामा खानुहोस् । नियमित अन्तरालमा खाना खाँदा यसले इन्सुलिनलाई राम्रो रेस्पोन्स गर्छ भने फास्टिङमा रगतमा कोलेस्ट्रोलको लेभल घटाउँछ । नियमित अन्तरालमा खाना खाँदा अत्यधिक खाने स्वभावमा पनि कमी आउँछ जसले गर्दा ओभरइटिङको समस्या समाधान भई क्यालोरी कम गर्न मद्दत गर्छ । जंक फुडलाई निषेध नै गर्नुहोस् ।
३.कामको लोड बढ्यो भनेर नआत्तिनुहोस् । नियमित कामको आयतनलाई जति सकिन्छ बढाउनुहोस् । काम गरेर केही हानि हुँदैन । काम नभएको समयमा गफिनु वा कुकुरलाई लिएर वाकमा जानुभन्दा म्युजिक अन गर्नुहोस् र डान्स गर्नुहोस् । यसबाट तपाईंलाई रिपेसमेन्ट त हुन्छ नै धेरै नै क्यालोरी बर्न पनि हुन्छ ।
४.हरेक दिन कम्तीमा पनि आठ गिलास चिसो पानी पिउनुहोस् । पानी केबल प्यास मेट्नका लागि मात्र होइन, यसले शरीरको मेटाबोलिज्मलाई तीव्र बनाउन मद्दत गर्छ । जर्मनीका अनुसन्धानकर्ताले लामो समय गरेको अध्ययनले के देखाएको छ भने दैनिक आठ गिलास चिसो पानी पिउनाले मेटाबोलिक रेट ३० प्रतिशतले बढ्छ । चिसो पानी पिउँदा शरीरको एकतिहाइ शक्ति पानीलाई तातो बनाउनमा खपत हुन्छ । अनि शरीरले पानीलाई सोस्न पनि थप शक्ति खर्च गर्छ । पानी पिउँदा क्यालोरी बढ्दैन, बरु पानी शरीरमा सोसिनका लागि क्यालोरी खर्च हुन्छ । हामीले कोल्ड डि्रंक्स पिउँदा विभिन्न तत्त्वका साथै क्यालोरी पनि पिइरहेका हुन्छौँ । त्यसैले कोल्ड डि्रंक्सलाई निषेध गरौँ र शुद्ध पानी त्यो पनि सकेसम्म चिसो पानी पिउने गरौँ । खाना र स्न्याक्स खानुअघि र गुलियो पदार्थ तथा जुस पिएपछि पानी पिउनुहोस् ।
५.लिफ्टको प्रयोग गर्न छोड्नुहोस् । सिँढी चढ्ने/ओर्लने बानी गर्नुहोस् । एकैछिन फुर्सद मिल्दा स-साना बच्चाले जस्तो सिँढीको एउटा खुड्किलोमा उभिएर घरी माथि उक्लने र घरी तल झर्ने गर्नुहोस् । यसले तपाईंलाई रमाइलो अनुभूति हुनेछ, अनि रमाइलोमै तपाईंको क्यालोरी पनि बर्न भइरहेको हुनेछ ।
६.आफ्नो झोलालाई बोझ सम्झन छोड्नुहोस् । झोला गह्रौं भयो भन्दैमा झोला बोक्न कसैको सहायता माग्नुभन्दा आफ्नो झोलाको बोझलाई उचाल्ने बानी गर्नुहोस्,जसले गर्दा झोलाले डम्बेलको काम गर्छ र तपाइर्ंको क्यालोरी घटाउँछ । सकेसम्म एउटा हातमा नियमित ब्याग र अर्को हातमा सामान किनेको झोला बोक्नबाट नडराउनुहोस् । कतै ट्राभलमा हुनुहुन्छ भने एउटा ठूलो सुटकेस बोक्नुको सट्टा स-साना दुईवटा सुटकेस लैजानुहोस्,जसले गर्दा सुटकेस बोक्न कसैको सहयोग माग्नुपर्दैन र तपाइंको क्यालोरी घटाउन पनि यसले थाहै नपाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ ।
७.हरेकपटकको खानामा चार ग्राम फाइबर समावेस गर्न नबिर्सनुहोस् । उच्च फाइबरयुक्त खानाले तपाईंको क्यालोरी इन्टेक घटाउँछ । हरेक दिन खानामा कार्बोहाइड्रेटलाई कम गरी कम्तीमा २५ ग्राम फाइबर खानुहोस् । फाइबरले कार्बोहाइड्रेट इन्टेकलाई घटाउने मात्र होइन, फाइबरयुक्त खाना बढी चपाउनुपर्छ जसले पचाउन सहयोग पुर्‍याउने हार्मोनको उत्पादन वृद्धि गर्छ । खाजाको समयमा पनि टिडबिड्सभन्दा फलफूल खाने गर्नुहोस् । यसले तपाईंको भोजनमा फाइबरको मात्रा बढाउन सघाउ पुग्छ । एउटा ठूलो स्याउमा तपाईंले ५ ग्राम फाइबर पाउन सक्नुहुन्छ । यस्तै एक कचौरा काँचो ब्रोकाउलीमा पनि ५ ग्राम फाइबर पाइन्छ ।
Filed under: समचार « राजदूत शर्मा सम्मानित शुरु भयो सत्ताको खेल्,अब कुन नेताको भाग्य चम्किने हो ? »
sbcjeevan kc, on मार्च 15, 2010 at 7:22 बिहान said:	sureko news herda ta Radio Nepal jasto lago tara pachi pardai jada ta online news jasto cha , Radion nepal ka wasta karmachari le padeko jasto cha ni double news??????
जवाफ फर्काउनुहोस् sitaram chaulagain, on मार्च 15, 2010 at 2:09 अपराह्न said:	Rb vai
Good job of the article,its very important for who doen’t want run and having light exercise, at list it can be help ful if they follow those rules.
जवाफ फर्काउनुहोस् kaluman&hima rai jhapa, on मार्च 16, 2010 at 7:10 बिहान said:	होइनहौ आर बि सर मोटापन नघटाऊ कसरी मोटाइछ तियो उपाय सिकाउनुहोस् म आजैबाट सुरु गरौउला किन भने म यक्दमै पातलोछु mero rak6iya gara prabhu